Hakuna chisina muridzi | Kwayedza
Hakuna chisina muridzi
22 Mar, 2019 - 00:03	 2019-03-21T17:54:22+00:00 2019-03-22T00:00:51+00:00 0 Views
HAKUNA chisina muridzi. Zita rine muridzi, nemuridzi wezita ane varidzi. Kunyepa kuye kana tichinzwa kuti kune vana vasina anababa.
Munogona kunge musiri kuona munhu arasa marara, asi marara ese – ari mubhini neasiri – ane varidzi. Sango nderemhuka, nemhuka ndedzesango. Mombe inogona kusazivikanwa kuti ndeyani, asi hazvireve kuti unogona kuiuraya ukaidya.
Vanhu vane muridzi.
Vanhu vane muridzi asiri sabhuku kana mambo. Vanhu ndevaMwari, asi nyangwe zvakadaro, Mwari haamanikidze vanhu kuti vanzi vanhu vake.
Variko vanhu vakasarudza kuve vanhu vezvimwe zvinhu. Kedha ndewembanje. Fidza ndewemadhiri. Peshi ndeweMake-up. Chipo ndewezvibhakera. Mai vaye ndevekunyepa. Baba vaye ndevemadhirezi. Mukoma John ndevekuchechi. Anna ndewemagitare nedoro.
Une zvaunozivikanwa nazvo nevanhu kuti zvinokuita muridzi wazvo. Saka iwe uri waani? Unoteerera zvipi zvinokumhanyisa ropa mutsinga? Ndezvipi zvausingagone kuregedza nekuti wakaita hushamwari kana sungano nazvo?
Panyika pano tine simba rekuda kana kusada, rekuita kana kusaita. Chii chinokukurira zvekuti nyangwe wanga wamboita new year resolution kuti gore rino ndicharegedza kuita ichi nechocho, unozongoerekana wave kuzviita zvekuti vanhu vanotokuseka kuti “taizviziva kuti hakuna kure kwaunoenda.”
Nemiwo Mhofu ndiri kuona kuti munofarira kunditumidzira nyaya nemifananidzo kana mavhidhiyo evanhu vasina kupfeka kana kuti vari kuita zvinhu zvinomutsa pfungwa dzebonde. Ndinofara kuti hamusati manditumidzira zvine vanhu vari kuita bonde, asi ndinofunga kuti rimwe zuva ndikaramba ndakanyarara muchanditumira.
Saka handicharamba ndakanyarara nekuti mungazofunga kuti zvamunofarira ndizvo zvandinofarira. Mungazofunga kuti neniwo ndiri munhu wenyaya dzezvebonde.
Kana ndikawana munhu anondibvunza kuti Mhofu unovaziva here, uye vanofarira chii, handifunge kuti ndinenge ndarasika ndikapindura kuti munofarira nyaya dzezvamunotumira. Ndiyo nyika yenyu, ndizvo zvinokusekenyedzai.
Ndinotya kuti nditi ndinokuzivai nekuda kwekuti munoda nyaya dzine chekuita nebonde. Zvinhu zvaunofarira zvinokuita munhu wazvo. Nemi Mhofu maonero enyu nenyaya dzenyu zhinji inyaya dzezvine chekuita nebonde.
Ini handisi mupurisa wetsika nehunhu. Handidi kutevera vanhu kwese kwese uye mune zvese zvese zvavanoita. Asi ndinonetseka nehupenyu hwatave kurarama husina miganhu, mabhureki kana maStop sign.
Chii chiri kutitadzisa kutiza mukadzi waPotifa ari kuti huya urare neni? Mhofu, hadzisi dzese shiri dzinodyiwa nyama. Dzimwe shiri magora, mazizi neturemwaremwa. Mhofu pamasvika apa mave munhu wevamwe vanhu?
Mavhidhiyo nemapikicha nezvinonyadzisa zviri kuuya neWhatsApp zvinogadzirwa naani? Kana tazviona toenda here kunobvunza nyoka yaEve kuti mubvunzo wayo wairevei pawakati, “Nhai ndizvo here kuti Mwari akati, ‘Regai kudya miti yese yemumunda?’”
Mhofu, ndinozviziva kuti munogona kuti, “Ndinoita chero zvandinoda kuita,” asi hazvisi zvese zvatinoita, zvatinoona kana zvatinokoshesa zvinotibatsira.
Kana tisingavenge zvinovengwa naMwari, kureva kuti tinovenga Mwari. Kana tikaramba kuramba zvakarambwa naMwari tichida zvinogadzirwa nevanhu saka tave vanhu vevanhu. Asi Mwari vane chikonzero chavakati zvinhu zvive nemaitirwo azvo – zvese zvaunobvumirwa nezvausingabvumirwe.
Mwari havatirambidze kuita zvatinoda nekuti havamakinikidze vanhu kuti vavanamate. Asi kubva kare vanhu vasati vave neSwag, masmartphones neSophistication, zvinhu zvaive nemiganhu. Kuona chaiko kwaive nemiganhu, uye vanhu havana kumbofa nekuti havana kuona zvisingaonekwe.
Kana uri wekutamba nekutambisa magate uchiimba stonyeni, kana nyaya dzako paWhatsApp dziri dezvebonde tarisa pauri uone kana usati waunganirwa nenhunzi here.